Kutarisa kuseri kweInokatyamadza Scenes yeStainable IMEX America
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » misangano » Kutarisa kuseri kweInokatyamadza Scenes yeStainable IMEX America
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Sustainability News • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Shanyira kuMGM Resorts Mega Solar Array.
Izvi zvinotora "kuseri kwezviitiko" kusvika kumatanho matsva! MGM Resorts yakakoka rwendo rweIMEX America vanopinda kuMega Solar Array yavo yekutarisa-padyo saiti iyo inopa masimba avo eLas Vegas zvivakwa.
Rwendo urwu rwakaitika mugwenga panzvimbo ye640-acre muNevada uye yaive chikamu cheSmart Monday paIMEX America.
Ikoko, vaivepo vakawana mukana wekuona kuti magetsi ezuva anogadzirwa sei kuburikidza nekushandiswa kwe300,000+ solar panels.
Uku kwaingova kushanya kumwe kweakawanda akagadzirwa neIMEX sechikamu chebudiriro yayo yehunyanzvi uye chirongwa chezviitiko zvemagariro.
Rwendo rwekuenda kunzvimbo yemaeka 640 mugwenga raive chikamu che Smart Muvhuro, Inofambiswa neMPI.
Boka revakapinda makumi maviri nevashanu rakashanyira nzvimbo inokatyamadza yechisikigo kuti vaone kuti magetsi ezuva anogadzirwa sei ne25+ mapaneru, kuti anogovaniswa sei mugedhi rezvivakwa zveMGM, uye kuti anobatsira sei kuderedza kuburitswa kwegasi regreenhouse uye kugonesa zvimwe zviitiko zvine hushamwari hwemamiriro ekunze.
IMEX America parizvino iri kuitika paMGM Property, Mandalay Bay, kubva muna Mbudzi 9 - 11.
Rwendo urwu rwaingova rwumwe rweakawanda akagadzirwa neIMEX nevamwe vayo vakasiyana sechikamu chebudiriro yehunyanzvi uye chirongwa chechiitiko chemagariro chinomaka chinyorwa chegumi cheratidziro yekutengeserana inotungamira pasi rose yeindasitiri yezviitiko zvebhizinesi repasi rose.